“Raharaha andramena” : eto Antananarivo ihany ny foiben’ny fitsarana manokana | NewsMada
“Raharaha andramena” : eto Antananarivo ihany ny foiben’ny fitsarana manokana
Nitondra fanazavana, momba ny hananganana ilay fitsarana manokana hisahana ny ”Raharaha andramena sy voamboana”, ny mpahay lalàna, Rakotomanana Honoré.
“Raha any Antsiranana, Antalaha, Taolagnaro, ohatra, no tena mpanondrana andramena be dia be, eto Antananarivo ihany no hitsarana azy”, hoy ny ny mpahay lalàna, ny Pr Rakotomanana Honoré, teny Anosy, omaly, momba ny fananganana ny fitsarana manokana momba ny “Raharaha andramena“.
Ahoana izany ny hitaterana ny olona eto Antananarivo amin’izany? Efa nanome 4 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy ny Banky iraisam-pirenena. Hikarakarana ny fampiakarana ny olona eto Antananarivo izany: ny olona voampanga, ny vavolombelona.
Tsy maintsy arovana ireo olona nanao heloka, satria mety hilaza izay tena olona ao ambony na ny atidohan’ny mpanondrana an-tsokosoko andramena. Izay no tena sarotra be, araka ny fanazavany. Tsy maintsy arovana koa ny vavolombelona. Izay no hitondrana azy ireo aty Antananarivo, misy ny foiben’ny fitsarana manokana.
Sarotra ny hampodiana ireo mitsoaka any ivelany
Efa nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny lalàna momba nyfananganana ny fitsarana manokana misahana ny “Raharaha andramena“. Mbola misy ahiahy ny amin’ireo mpanondrana an-tsokosoko andramena; avy eo, mitsoaka any ivelan’i Madagasikara.
Tokony hisy lalàna momba izany. Nefa tsy ho vita vetivety ny fifanarahana iraisam-pirenena momba izany, araka ny fanazavan’ity mpahay lalàna ity. Satria misy ampahan’ny fiandrianampirenena voatohintohina na miala amin’izany, raha manaiky ny lalàna iraisam-pirenena.